“ဘဝပေါင်းများစွာ” – ရင်နင့်အောင်ခံစားရပါတယ် ညီမလေးရေ ဒီလိုအဖေမျိုးအတွက် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ – popin
“ဘဝပေါင်းများစွာ” – ရင်နင့်အောင်ခံစားရပါတယ် ညီမလေးရေ ဒီလိုအဖေမျိုးအတွက် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ
August 9, 2019 သတင်းမှန်​0
ရင်နင့်အောင်ခံစားရပါတယ် ညီမလေးရေ ဒီလိုအဖေမျိုးအတွက် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ.. ကျမနဲ့အမေအတွက်တော့ အဖေက သူရဲကောင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့… ကျနော်လည်း ဒီစာရေးတဲ့ညီမလိုတွေးခဲ့တာ အဖေ့ကိုနာကျည်းခဲ့တာ အဲဒီအတိုင်းပဲ…
“ဘ ဝ ပေါင်း များ စွာ”
ထောင်တွင်းကျဆုံးခဲ့သည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ဂုဏ်ပြု ခြင်း ဆိုတဲ့ စာတန်းကို ကျမ မမှိတ် မသုန် စိုက်ကြည့်နေမိတယ် ကျမ အိမ်ကို လူတယောက် ဖိတ်စာလာပေးတယ် အဖေ့ကို ဂုဏ်ပြု မလို့ တဲ့လေ။ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ရင်မှာ လှိုက်တက်လာတဲ့ ဒေါသတွေနဲ့အတူ ဖိတ် စာကို ကျမ လွင့်ပစ်လိုက်မိတာပေါ့။ ရင်ထဲမှာလည်း နာကျင်ကြေကွဲစွာ ရီလိုက်မိတယ် အဖေက အဖေက လေ ဘာတွေများ ဂုဏ်ပြုစရာ ကောင်းနေလို့ လဲ…..။
နံနက်စောစော ဘယ်သူ မှ မထ သေးတဲ့ အချိန်မှာ ကျမ နဲ့ အမေ ထ တယ်။ ကောင်းညှင်းပေါင်း ပီး ပဲပြုတ် ပီးတော့ တောင်းလေးကို ခေါင်းပေါ်ရွက်ပီး ရပ်ကွက်ထဲကို အမေက လှည့်ရောင်းတယ်။ အဖေ တခါ တခါ နေ့ လည်စာမှာ ကျန် တဲ့ ကောက်ညင်း နဲ့ပဲပြုတ်ကို အမေ နဲ့ကျမ စားခဲ့ရတယ်ဆိုတာ အဖေ သိမှသိပါလေစ။ လွယ်အိပ်ကလေး တလုံးလွယ် လူငါးယောက်လောက် နဲ့ အိမ်မှာ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက် အဖေ ပြောနေကျ လက်သုံးစကား ရှိတယ်လေ သန်း ၅၀ သော ပြည်သူတွေအတွက် ငါ့ တို့ အသက်တေကို ပေးလို့အလုပ်လုပ်ရမယ် တဲ့။
တခါမှ မငိုခဲ့ဘူးတဲ့ ကျမ လူတွေအများကြီးရှေ့မှာမှ ကျမကို ဆုပေးနေတဲ့ လူကြီး ရှေ့မှာမှ ရှိုက်လို့ ရှိုက်လို့ အားရပါးရ ငိုလိုက်မိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဆုပေးတဲ့ လူကြီးရဲ့ စကားသံက ကျမ နားထဲကို ဗုံးတလုံးလို ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ် “မငိုပါနဲ့.. ကလေးရယ် ကလေးရဲ့အဖေက သူရဲကောင်း ပါတဲ့” ဟုတ်ရဲ့လား…. သန်း ၅၀ သော ပြည်သူတွေအတွက်တော့ ဟုတ်ချင်ဟုတ်ခဲ့မယ်။ ဒါပေမဲ့…. ကျမ နဲ့ အမေ အတွက်တော့ မဟုတ်ဘူး
ဝမ်းနည်းချင်းများစွာဖြင့် … ယု ယ ….
လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်, share from Baganthar
ပေါင်​မြို့ နယ်​တွင် ​​တောင်​​စောင်း​မြေပြိုကျ၍ ​နေအိမ်​(10) ​လုံးခန့်​​မြေကြီးပိကာမိသားစုဝင်​အများအပြား ထိခိုက်​​သေဆုံး ဒဏ်​ရာရရှိPrev
သေဆုံးသူ(၅၀) ကျော်ထိဖြစ်လာတဲ့..ပေါင်-မော်လမြိုင် မြေပြိုမှုမှာ ညပ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုကယ်ဆယ်နေမှု (ရုပ်သံ)Next
ပေါင်​မြို့ နယ်​တွင် ​​တောင်​​စောင်း​မြေပြိုကျ၍ ​နေအိမ်​(10) ​လုံးခန့်​​မြေကြီးပိကာမိသားစုဝင်​အများအပြား ထိခိုက်​​သေဆုံး ဒဏ်​ရာရရှိ
မုဒုံRescue မှအုပ်​ကြီးရန်​ကုန်​မှအပြန်​..မွန်​ပြည်​နယ်​ ​ပေါင်​မြို့ နယ်​၊မုတ္တမအပိုင်​..ပဲပြာကုန်းရွာတွင်​​တောင်​​စောင်း​မြေပြိုကျ၍​နေအိမ်​ဆယ်​လုံးခန့်​​မြေကြီးပိကာမိသားစုဝင်​အများအပြားထိခိုက်​​သေဆုံးဒဏ်​ရာရရှိပါတယ် လူနာများအား​ရှာ​ဖွေကယ်​ဆယ်​ပြီး​ပေါင်​မြို့နယ်​ပြည်​သူ့​ဆေးရုံသို့ ဆက်​လက်​ကူညီလွှဲ​ပြောင်းပို့​ဆောင်​၊ဖြစ်​စဉ်​များအာဏာပိုင်​အဖွဲ့အစည်း၊​မော်​လမြိုင်​နှင့်​​ပေါင်​မြို့Rescue,ကူညီကယ်​ဆယ်​​ရေးအဖွဲ့များထံချိတ်​ဆက်​သတင်းပို့​ပေးခဲ့ပါသည်​။ ​ပေါင်​ရိုးကျိုးလူနာ၊ဦး​ခေါင်းထိခိုက်​ဒဏ်​ရာရလူနာ၊ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ဒဏ်​ရာရလူနာ၊စိတ်​ဂ​ယောင်​​ချောက်​ခြားဖြစ်​နေ​သူလူနာစုစု​ပေါင်း​လေးဦးအား​ပေါင်​မြို့ပြည်​သူ့ ​ဆေးရုံသို့ လွှဲ​ပြောင်းပို့​ဆောင်​​ပေး​နေ… #အညတရ မုဒုံအုပ်​ကြီး ​ခေတ္တ-…